Xog:- Muuse Biixi iyo Gudoomiye Baashe oo isku khilaafsan arin xasaasi ah lagana yaabo inay ku kala tagaan. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Xog:- Muuse Biixi iyo Gudoomiye Baashe oo isku khilaafsan arin xasaasi ah lagana yaabo inay ku kala tagaan.
Khilaaf ayaa xilligaan waxaa uu ka taagan yahay guddiga doorashooyinka Somaliland, iyada oo siyaabo kala duwan ay uga kala hadleen Madaxweynaha Soomaaliland iyo Gudoomiyaha Golaha Wakiilada Somaliland.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay inay jirto warqad uu qoray Xisbiga mucaaradka Soomaaliland,hayeeshee uu u sheegay kala shaandheynta Guddiiga doorashada ay xaq u leeyihiin Golaha Wakiilada Somaliland.
Dhainaca kale Guddoomiyaha Golaha Wakiilada Somaliland Baashe Maxamed faarax ayaa sheegay in cidda kaliya ee sharci ahaan awood u leh inay kala shaandhayso xubnaha gudidda doorashooyinka ee cusub ay tahay Golaha Wakiilada.
Waxaa uu sheegay in Golaha ay soo gaareen 7 xubnood oo guddiga ah,kuwaas oo ay kala keenayaan 2 Xubnood ay xaq u leeyihiin golaha guurtida, min hal xubin Xisbiyada mucaaradka halka Madaxweynaha ay ka imaanayaan 3 Xubniid sidasina uu madaxweynaah wareegto kusoo magacaabayo.
Previous articleDAAWO:- Beelaha dega gobolka Awdal o ku midoobay dagaal ka dhan ah Somaliland + Maleeshiyaad xurnimo udirir ah oo la diyaariyay iyo Sland oo yaaban.
Next articleDAAWO:- DFS oo soo saartay awaamir kusaabsan waxbarashada oo aad udag “Awaamir aan abid la arag”.